AKHRISO:- Maxaa ka jira in Mooshin laga Gudbiyay R/wasaare Kheyre? – XAMAR POST
AKHRISO:- Maxaa ka jira in Mooshin laga Gudbiyay R/wasaare Kheyre?
Warbaahinta Soomaaliya ayaa inteeda badan saaka qoreysa in Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka ay diyaariyay mooshin xilka looga qaadayo Xukuumadda uu hoggaamiyo Ra’iisul Wasaare Kheyre, iyadoo lagu wado in loo gudbiyo Guddoonka Baarlamaanka marka la saxiixo.
Inkastoo Qoraalka Xildhibaanadu ay ku sheegayaan in ay Mooshin ka keeneen Wasiirka Kowaad ee Xukumadda Soomaaliya uusan Saxiixoodu saarneyn ayaa Warar soo baxaya waxaa ay sheegayaan in illaa 50 Xildhibaan ay Mooshinka ka gudbiyeen Wasiirka Kowaad ee Xukumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyrre.
Mooshinka ayaa la Xiriira Go’aankii 6-dii Bishaan ay Xukumaddu ka qaadatay C/kariin Sheekh Muuse Qalbi-dhagax oo ahaa Xubin sare oo ka tirsan Jamhadda ONLF,waxaana Xildhibaanada Mooshinka Gudbiyay ay leeyihiin waa Muaadin Soomaaliyeed oo loo Gacan galiyay Dal Cadaw ah.
10-Qodob oo Muhiim ah ay kala Saxiixdeen Galmudug & Puntland